Omena feo ireo fokonolona mitantana ny harena an-dranomasina | Région Boeny
Fihaonambe arahina dinik’asam-paritra ho fampivondronana ireo fokonolona mitantana ny harena an-dranomasina eto Madagasikara aty amin’ny faritra avaratra no notanterahina ny 7 hatramin’ny 9 septambra 2015 tao amin’ny sampandraharaham-paritry Fiompina eto Mahajanga.
Ny tambazotra MIHARY na “Mitantana Harena an-dRanomasina avy eny Ifotony” no nitarika izao fihaonambe izao. Araka ny voalazan’ny mpandrindra ankapobeny, Rtoa Vatosoa Rakotondrazafy, dia ny hamaly ny filàna ary hitady ny vahaolana sy ny fanatsarana ny fari-piainan’ireo fokonolona mitantana ny harena an-dranomasina manerana an’i Madagasikara no tena ny ifotoran’ny MIHARY.
Aorian’izao dinik’asam-paritra izao dia hiazo an’i Mananara ity tambazotra ity, hanatanteraka ny fihaonambem-pirenena 2015 ho fandravonana ny paik’ady entina hamahana ny olana sedrain’ireo fokonolona mitantana ny harena an-dranomasina ao anatin’ireo faritra avaratra antsinana, avaratra andrefana ary atsimo andrefana.
Ny MIHARY dia miara-miasa amina fikambanana tsy miankina maro samy hafa. Ny tanjony dia ny fampifandraisana ireo fokonolona mitantana ny harena an-dranomasina aty amin’ny faritra avaratra, fanomezana feo azy ireo manoloana ny olana sedrainy eny ifotony, manatanteraka fifanakalozan-kevitra ary manamafy ny traikefan’izy ireo eo amin’ny fanjonoana.
Nandritra ny dinik’asa dia samy namoaka ny heviny ireo fokonolona mitantana ny harena an-dranomasina mikasika ny fanentanana ny mpiara-monina amin’ny fitandrovana ny tontolo iainana, ny fiarovana ny zon’ny vehivavy, ny fitantanana ny asa ho mahomby, ny fitadiavana vadin’asa ankoatra ny fanjonoana an-dranomasina sy ny tokony ataon’izy ireo amin’ny fananganana fikambanana na kaoperativa ary fangatahana ny fahazoan-dàlana ara-mpanjakana amin’ny asa fanjonoana.
Nanatrika izao dinik’asam-paritra izao ireo avy amin’ny sampandraharaham-paritry ny Harena anaty rano sy ny Jono eto Boeny. Teo ihany koa ny fiaraha-miasa malagasy alemaina Page (Programme d’appui et de Gestion environnementale)-Giz izay mpanohana ara-bola sy ara-teknika.